Manomboka milamina ny tanàna | NewsMada
Manomboka milamina ny tanàna
Miitatra tsikelikely amin’ny toerana maro ny fanadiovana ataon’ny tompon’andraikitra amin’ireo mpivarotra amoron-dalana. Tsikaritra ny tanàna manomboka miiratra sy milamina. Faly ny mponin’Antananarivo. Milamina ny fifamoivoizana. Tsy mikorontana intsony ny sisin-dalana. Malalaka ny lalana na ny arabe na ny fandehanan’ny mpandeha an-tongotra. Mihena, manaraka izany, koa ny mpanao sinto-mahery satria tsy mifanisika amin’ny mpivarotra amoron-dalana intsony rehefa mandeha.
Maro ireo maniry ny hiitaran’ity fanalana mpivarotra amoron-dalana ity amin’ny toerana hafa. Anisan’izany ny eny 67 ha izay tena mampiteny ny moana ny gaboraraka. Tsy misy hodiavin’ny mpandeha an-tongotra intsony ny lalana. Manginy fotsiny ny faharatsian’ny lalana amin’ity toerana iny. Ny tsy fandriampahalemana, tsy lazaina intsony ary efa voafaritra ho isan’ny faritra mena mihitsy ny eny 67 ha amin’ny fieren-jiolahy. Tsy misy fitoniana ny mponina eny amin’ireo rehetra ireo.
Voakasik’izany indrindra koa ny eny Andravoahangy sy ny eny Behoririka rehetra iny izay feno mpivarotra ny sisin-dalana. Malalaka sy midadasika ny tsena kanefa babangoana tsy misy mpivarotra.
Ankoatra ny fanesorana ny mpivarotra amoron-dalana, manantena ny handraisana fepetra amin’ireo fiara mijanona amoron-dalana izay manelingelina ny fifamoivoizana ihany koa ny mponin’Antananarivo. Anisan’ny fositra amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto Antananarivo ireny.
Tsy azo hadinoina ireo 4’mi mpirenireny mandoto tanàna sy manimba ny endriky ny Renivohitra izay mila handraisana fepetra manokana ny amin’izy ireo.
Tsy misy anavahana ny toerana rehetra eto Antananarivo fa tokony hitovy avokoa ny fepetra raisina. Matoky ny fandraisana andraikitry ny kaominina ny mponin’Antananarivo amin’ny tena fanadiovana hita maso sy mihatra avy hatrany toy izao fanesorana mpivarotra amoron-dalana sy tsy ara-dalàna izao.
Enga anie haharitra ny fampiharana ny lalàna hananana tanàna mirindra sy milamina.